Gaudí - Safar uu ku marayo shaqadiisa weyn sida Casa Batlló | Safarka Absolut
Casa Batlló iyo shuqullo kale oo waaweyn oo garaadka Gaudí ah oo aad booqan karto
Antoni Gaudí wuxuu ka mid ahaa dhismeyaashii waaweynaa iyo wakiilkii ugu sareeyay ee casriyeynta Isbaanishka. Sidan oo kale, wuxuu nooga tegey dhaxal weyn oo aad soo booqan karto maanta si aad u sii wadatid bogaadinta shuqulladiisa, taas oo aan kaaga tagi doonin danayn aan ognahay. Midkood waa Casa Batlló laakiin waxay leedahay kuwo kale oo badan oo ay tahay inaynu ogaanno ama waxoogaa u soo dhowaanno.
Sidaa awgeed, waxaan dooranay inaan sameyno safar dalwaddii ah iyada oo loo marayo qaar ka mid ah shaqooyinka ugu caansan uguna male-awaalka badan. Dhammaantood waxay leeyihiin shaqsiyan, hal-abuur iyo mala-awaal dhammaystiran oo iyaga siinaya natiijo u gaar ah. Wax ku sifoobay sida ugu casriyeynta shaqsiyeed. Aynu xirxirno maxaa yeelay safar ayaan galeynaa!
1 Sagrada Familia ee Antoni Gaudí
3 Beerta Guell
4 Guriga Vicens
5 Capricho ee Gaudí
6 Guryaha Booties
Sagrada Familia ee Antoni Gaudí
Basilica-ka ku yaal Barcelona waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu booqashada badan, dhismihiisuna wuxuu bilaabmay 1882, inuu ka mid noqdo kaniisadaha ugu dheer adduunka. In kasta oo uu in badan leeyahay, waxaan dhihi karnaa waa hal-abuurkiisii ​​weynaa. Tani waxay mashquulisay sanado badan oo noloshiisa ah iyo sidoo kale, iyada, wuxuu gaadhay xilligii dabiiciyanka, durba wajigii ugu dambeeyay ee xirfaddiisa, halkaas oo ay ka koobnaan doonto dhammaan waxyaabaha kor ku xusan. Kan ugu weyn ee macbudka waxaa lagu sameeyay qaab dabiici ah marka laga reebo qeybta crypt ee ku jirtay Neo-Gothic. Qaababka joomatari ahaan ma maqnaan karaan, mana la mid noqon karaan dabeecadaha. Haddii aadan wali booqan, ma seegi kartid ballantan astaanta leh Antoni Gaudí!
Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa dib-u-habeynta dhisme, oo ku yaal Paseo de Gracia ee magaalada Barcelona. Waxaan dhihi karnaa waxaan ku jirnaa xilligii dabiiciga ahaa ee Gaudí, halkaasoo uu kaamil yeelay qaabkiisa shaqsiyadeed iyo in waxyiyiisu ay ka yimaadeen dabeecadda. Markuu sidaa yidhi, booqasho Casa Batlló waxay noqon kartaa mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee dareenkaaga. Sababta Hagaag, maxaa yeelay booqashadu waxay noqon kartaa mid si heer sare ah u dhexgasha iyada oo ay ugu wacan tahay sirdoonka farsamada, codka binauralka ama dareemayaasha dhaqdhaqaaqa Si kale haddii loo dhigo, hab lagu dhexgalo adduunka Gaudí, oo ah aragtida waxa uu arkay ama dareemay waxa uu dareemay iyada oo loo marayo bandhig maqal ah. Waa waayo-aragnimo gaar ah oo ka jawaabi doonta su'aalaha ay ka mid yihiin muxuu ahaa dhiirrigelintiisa, sida male-awaalkaas loo abuuray iyo wax kasta oo ku xeeran.
Booqashadan, waxaad ka jawaabi doontaa waxaas oo dhan iyo in ka badan. Maadaama aad ka heli doontid qol immersive ah oo aad ku raaxeysan doonto in ka badan kun shaashadood. Iyaga dhexdooda waxaad ku ogaan doontaa dhammaan sirteeda ku saabsan asalkeeda 'Gaudí Dome'. Laakiin araggu kaliya kuma filna, laakiin codadka ugufiican ayaa kugu hareerayn doona mahadnaqa 21 kanaalada maqalka ee qabta ruuxa dabeecadda iyo dabcan, saadaasha mugga, halkaasoo sixirku ka badnaan doono dhabta.
Ka dib markaad ku raaxeysato bilowgeeda ama asalkeeda, waxaa la joogaa waqtigii sidoo kale la geli lahaa maskaxda Gaudí. Wax run ahaantii umuuqda mid adag! Laakiin Gaudí Cube, waa la gaari doonaa. Qol cusub oo ay ku jiraan cube 6 dhinac ah oo loo yaqaan 'LED cube'. Iyada oo aad awoodi doonto inaad beddesho dhammaan aragtida dhabta ah, waxay kuu geyneysaa adduun kale, khiyaal, laakiin had iyo jeer kaa caawinaya dhammaan dareenka, adigoon ilaawin inaan ku jirno maskaxda caqliga. Dabcan, tan awgeed, waxaa jiray shaqo cilmi baaris dhameystiran oo ka dambeysay. Xullo sawirro ah ayaa la sameeyay, iyo sidoo kale qoraallo ama sawirro iyo waxyaabo kale oo, iyagoo gacan ka helaya sirdoonka farsamada, nolosha u siiyay mashruucan. Xaqiiqda ayaynu ku arki doonnaa indhihiisa iyo calaamadda uu adduunka kaga tegey.
Goorma ayaynu galaynaa Casa Batlló, qaar baan ku raaxaysan doonaa saadaasha noloshiisa, sawiradii waagii hore iyo waxaas oo dhami waa waddo uu ugu safro wakhtigiisa. Waxyaabo kale oo cusub ayaa ah in si fudud loogu dhowaado rinjiyeynta, dareemayaasha dhaqdhaqaaqa ee lagu rakibay iyaga ayaa bilaabi doona soosaarid filim yar, sidaasna ku ogaanaya macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan guriga iyo bu'da qoyska. In la dhammeeyo ku raaxeysiga dhammaan dhaxalkiisa laakiin qofka ugu horreeya, taas oo ka dhigaysa khibrad sixir ah oo ay tahay in lagu noolaado, ugu yaraan, hal mar noloshiisa. Miyaad ku dhacdaa inaad ogaato waxyaabaha ka yaabiyey?
Buurta Carmelo, waqooyi-galbeed ee Barcelona, ​​waxaan ka helaynaa Park Güell, oo ah shaqooyinka kale ee ugu caansan ee Gaudí. Markaan aragno, waxaan ognahay inuu isaguna galayo xilligii dabiiciga iyo inuu ku raaxeysanayo qaab shaqsiyeed. Dhexdeeda waxaan ka heli karnaa geesaha gaarka ah sida isha San Salvador de Horta ama aragtida Joan Sales, halkaas oo aad uga raaxeysan karto muuqaalka dusha sare ee Barcelona. Horeba kaliya irridda ama teendhooyinka, waxaan horeyba ugu raaxeysan karnaa qaabka ugu badan ee caqliga. Meel kale oo ka mid ah meelaha ay tahay in sidoo kale la booqdo iyo haddii aad horeba u sameysay, socod ku wareegsan aagga marna kuma xumaanayo.
In kasta oo dhammaan mashaariicda naqshadaha ay leeyihiin muhiimaddooda iyo guusha ay ka dambeeyaan, xaaladdan markaan ka hadlayno Casa Vicens, waa inaan sheegnaa inay ahayd mid ka mid ah shaqooyinkii ugu horreeyay ee uu qabtay ka dib markii uu bartay cilmiga dhismaha. Marka laga yaabee, waxay ku dareysaa xitaa qiime intaa ka sii badan, haddii ay suurta gal tahay. Sababtaas awgeed, waxaan ku dhejin karnaa xilliga barriga, maaddaama ay leedahay buraashyada burushka ee Gaudí uu aad u jeclaa sannadihii ugu horreeyay. Dhismo lagu dhawaaqay inuu yahay Hanti Xiiso Dhaqameed iyo ka dib, oo ah Goob Dhaxal Adduun sanadkii 2005. Wuxuu nooga tagayaa midab weyn oo dhinaca facweedka ah, iyada oo ay ugu wacan tahay dhammaystirka dhoobada.
Capricho ee Gaudí
In kasta oo ay run tahay in inta badan shaqooyinkiisa ay ku yaalliin Catalonia, xaaladdan waa inaan ka hadalno 'hami' oo aaday Comillas oo ku taal Cantabria. Sidoo kale waa in lagu qaabeeyaa xilliga bari ee Gaudí, halkaas oo dhoobada dhoobada ahi ay yihiin kuwa ugu muhiimsan, marka lagu daro qaansoleyda iyo leben. Sidaad dhab ahaan u ogtahay, dhismahan waxaa loo rogay matxaf, maadaama aysan layaab aheyn. Kaliya adoo ku raaxeysta wajiga, way ku soo jiidan doontaa!
Tan iyo markii aan albaabka ka furnay El Capricho, isaguna si dhow ayuu ula socdaa guriga Botines. Sababtoo ah waa mid kale oo ka mid ah dhismayaashaas oo ka baxsan Catalonia iyo gaar ahaan León. Asal ahaan casriyeysan, waxay ahayd bakhaar iyo waliba hoy sannadihii ugu horreeyay noloshiisa. Laakiin horeyba 1969 waxaa loogu dhawaaqay Taallo Taariikhi ah oo Xiisaha Dhaqanka ah, oo dib loo soo celiyay 1996. Maanta waxay kaloo leedahay matxaf laakiin waxay haysaa bilicdii hore, nuxurka Gaudí iyo milicsiga maskaxdiisa. Kuwee baa booqday?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Casa Batlló iyo shuqullo kale oo waaweyn oo garaadka Gaudí ah oo aad booqan karto